Wheel & Castor Guide |
Castor အတွက် အသုံးများသော ပလတ်စတစ် အမျိုးအစားများ
ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းကို thermosetting ပလပ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအဖြစ် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ ရည်ညွှန်းသည့် ပလတ်စတစ် ပိုက်ဆံများကို ထုတ်လုပ်ရန် စျေးသက်သာသော်လည်း ဝန်အား ညံ့ဖျင်းပြီး ခံနိုင်ရည် ညံ့ဖျင်းသော ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ပါသည်။ပြီးတော့ သူတို့က သာမန်ပဲ...
Transparent Castor ၏ အားသာချက်များ
1. ဖက်ရှင်စတိုင်- ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် ဝမ်းဆူများသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဖက်ရှင်ကျသောအသွင်အပြင်ရှိပြီး ၎င်းသည် ဘဝတွင် မမျှော်လင့်ထားသော အလှဆင်မှုလေးများဖြစ်လာနိုင်ပြီး လှပသောအလှဆင်ထားသောနေရာများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။2.Noise Reduction: Transparent Castors များသည် ဘတ်စ်ကားများတွင် ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုများဖြစ်သည်...
ကြက်ဆူပင်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီး ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကို ခြေရာခံရန် ခက်ခဲသည်။ဒါပေမယ့် လူတွေက ဘီးကို တီထွင်ပြီးနောက်မှာ အရာဝတ္ထုတွေကို သယ်ယူရွှေ့ဖို့ ပိုလွယ်ကူလာတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။သို့သော် ဘီးများသည် ဖြောင့်တန်းစွာ ပြေးနိုင်သည်..။
သင့်လျော်သော ကြက်ဆူကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
21-11-17 ရက်နေ့တွင် admin မှ
1. ကြက်ဆူပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကို ဆုံးဖြတ်ပါ- လမ်းအရွယ်အစား၊ အတားအဆီးများ၊ အပလီကေးရှင်းဧရိယာ (ဥပမာ- သံခြစ်၊ ဆီ၊ အဆီများ)၊ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ (အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ ပုံမှန်အပူချိန် သို့မဟုတ် အပူချိန်နိမ့်ခြင်း) နှင့် ဝန်နှင့်ပတ်သက်သော ကျန်ရှိသော အရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။ ကြက်ဆူပင်၏ စွမ်းရည်သည် ကြာမြင့်သင့်သည်...
သင့်လျော်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
မှန်ကန်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပုံသေ၊ ဆုံလည်၊ ဘရိတ်ပါသော ဆုံလည်၊ ဘရိတ်အပေါက်နှင့် ဘရိတ်ပါသော အပေါက်စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအောက်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် အပိုပစ္စည်းဖြစ်သည်။ .ဥပမာ၊ supermar အတွက်...
1. Thread guard: ဘီးနှင့် ကိုင်ဆောင်သူကြားမှ ကင်းရှင်းအောင် လိမ်လှည့်နေသော အတားအဆီးကို တားဆီးပါ။2. ဖုန်မှုန့်- ဝက်ဝံမှ ဖုန်မှုန့်များကို တားဆီးပါ။3. Direction lock: လော့ခ်ဆောင်သောဦးတည်ချက်၊ လှည့်ပတ်သည့်အခြေအနေသည် ပုံသေအခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။4. တစ်ခုတည်းဘရိတ်- ကြက်ဆူလှုပ်ရှားမှုကို ခေတ္တရပ်ပါ။5. ဘရိတ်နှစ်ထပ်- သော့ခတ်ခြင်း ဦးတည်ချက်...
ဆုံလည်ဝမ်းဆူများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် ၅ ခု
1. စုဝေးရန် တူညီသော ဝမ်းနုတ်ဆေးကို သေချာစွာ အသုံးပြုပါ။2. အသုံးပြုသည့်အခါ ဘီးအပေါ် ဖိအားပိုမချစေရန် ဘီးရိုးသည် မြေပြင်နှင့် ထောင့်မှန်ရှိရမည်။3. ၎င်းသည် အသုံးပြုမှုများ၊ ဝန်နှင့် ရာထူးများအတွက် ကြိုတင်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားရန် လိုအပ်သည်...
ဝမ်းနုတ်ဆေးအသုံးပြုရန် အထွေထွေ ညွှန်ကြားချက်များ
Castor များကိုအသုံးမပြုမီ ၎င်း၏အသုံးပြုမှု၊ လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အသုံးပြုမှုအခြေအနေတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး သင့်လျော်သောအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပါ။အောက်ပါတို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ အာရုံစိုက်ပါ- 1. သင့်လျော်သော ဝန်ထမ်းခြင်း ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဝန်ကို သယ်ဆောင်သော ယေဘူယျဝန်ကို ရည်ညွှန်းသည်...
ပရိဘောဂ ဝမ်းဆွဲကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
နေ့စဉ်ဘဝတွင်၊ မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိရောက်စွာအာမခံနိုင်ပါသည်။ပရိဘောဂများ၏ မကြာခဏ ရွေ့လျားနေသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် ပရိဘောဂ ဝမ်းဆွဲများသည် ပရိဘောဂ၏ ဆွဲငင်အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် ပရိဘောဂ ဝမ်းနုတ်ဆေးများကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အရေးကြီးသော အရာဖြစ်လာပါသည်။...